Baidoa Media Center » Madaxweyne Xasan oo la kulmay safiiro badan.(Sawiro)
Madaxweyne Xasan oo la kulmay safiiro badan.(Sawiro)
September 20, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Madaxweynaha jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan ay albaada u xiran yihiin la qaatay safiiro ka kale socday dowladdo dhowr ah oo daneeyo arrimaha Soomaaliya kuwaas oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
Kulanka uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud la qaatay 14 safiir kuwaas oo ka kala socday wadamada daneeyo arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Safiirada uu kulanka la qaatay Madaxmweynaha ayaa waxa ay kala ahaayeen kuwo ka kala socday wadamada Holland, Danmarka, Brittan, Talyaaniga Spanish, France iyo dalal kale oo daneeyo arrimaha Soomaaliya waxaana kulanka looga hadlay xaalada dalka iyo sidii ay beesha caalamka dowladda uga gacan siin laheyd dib u dhiska dalka.
Markii uu soo gabagaboobay shirka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay agaasimaha warfaafinta Madaxtooyada Qaranka Suldaan Axmed Faarax waxa uuna sheegay in Madaxweynaha iyo safiiradii uu kulanka la qaatay ay ka wada hadleen sidii loo soo celin lahaa xasilooda iyo nabadda dalka, waxa ayna xubnihii ka socday beesha caalamka ay sheegeen in ay garab taaganyihiin dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii la soo dhaafay la kulmayay diblomaasiyiinta dalalka Soomaaliya daneeya qaarkood si uu ugu gudbiyo siyaasadda dowladda cusub ee ku wajahan ammaanka iyo horumarinta dalka.